Inotevera Apple HomePods inogona kuunza skrini uye makamera | Ndinobva mac
Apple inotevera HomePods inogona kuunza skrini uye makamera
Kana Apple chete bvisa iyo yekutanga HomePod uye zvakaonekwa kuti mini modhi inounza hunyoro uye tembiricha maseru asi kuti haasati amiswa zvakadaro, tinowanawo nhau dzezvinhu zvitsva zvavanoda kuwedzera kuchinhu. Aya ndiwo matauriro atinoita nezve mukana wekuti mutauri michina iri mumba inogona shandisa zvidzitiro uye makamera. Haisi budiriro, nekuti isu tatoziva kuti kukwikwidza mamodheru atove nehunhu uye Apple yatononoka. Asi zvirinani kunonoka kupfuura kare.
Nhau nyowani dzinotambirwa kubva kuApple, ino nguva inoreva iyo HomePod uye haisi imwe nhau kana zvisiri izvo munguva pfupi ramangwana tinogona kuona chigadzirwa chitsva chose uye chitsva. Neiyi nzira tinogona kuona kuti munguva pfupi iyo HomePod inogona kusanganisira zvitsva zvinouya zvinobatsira. Tave nenhau kuti zvakawanikwa kuti pane iyo HomePod mini tine tembiricha sensors izvo zvisina kuvhurwa uye kuti zvinopfuura zvingangoita izvo inogona kutangwa kuburikidza nesoftware.
Pamusoro peaya ma sensors akawanikwa, isu tine maonero ekuti vanogona kuisa zvidzitiro uye makamera. Iyo mushumo mutsva weBloomberg inoratidza kuti Apple inogona kunge ichiongorora pfungwa yemhando nyowani dzePambaPod ine skrini uye kamera. Kugona kukwikwidza neGoogle's Nest Hub Max, Amazon's Echo Show uye Facebook portal. Gurman anonyevera kuti «kuvhura hakusi pedyo«, Saka hapana vimbiso yekuti Apple ichatanga chigadzirwa chakadai. Saka isu tinogona kutarisira izvi zvishandiso pane iyo kwenguva yakareba pane mune ipfupi kana yepakati.
Apple's kamera-yakashongedzerwa HomePod yaizofungidzira kupa zvakafanana maficha senge FaceTime vhidhiyo yekufona uye kusangana kweKeKit kana ikambosvika pamusika. Zvingave zvakanaka kuzviona nekukurumidza zvirinani pane kutora nguva yakareba. Nekuti iyo kambani yeAmerica haifanire kufuratira vakwikwidzi vayo vanotova nemamodeli pamusika uye vane chokwadi chekuve ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Apple inotevera HomePods inogona kuunza skrini uye makamera
Chikanganiso chisina kunyanya kupararira chiri kubuda muYouTube app paApple TV
Ulysses inogadziridzwa kune vhezheni 22 nekuvandudzwa kutsva muiyo online edition